Iphupha malunga nokuFakwa Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Akukho mntu uthanda ukubanjiswa. Hayi ejele okanye kwindawo yabasetyhini, hayi kwilifti egudileyo okanye ilifti, okanye ubotshelelwe kwaye ubotshelelwe ngumlomo ngamasela. Zininzi iimeko apho sinokuthi sibambeke khona kwaye uninzi lwazo ngokuqinisekileyo luya kuza nemvakalelo yokungonwabi. Lulwazi lokungakwazi kwethu ukwenza into eyoyikisayo kuba xa sibanjiwe okanye sibanjiwe, asinakuphinda silawule okwenzekayo okusingqongileyo okanye nathi.
Kwilizwe lethu lamaphupha kunokubonakala ngathi kuyinyani ukubanjiswa. Zeziphi iintlobo zeengcinga ezivulekileyo ngaphakathi kuwe, kwaye yeyiphi imiyalezo enokuthi "ibhajwe" emva kwesimboli yephupha?
1 Umqondiso wephupha "elibanjiweyo" - ukutolikwa ngokubanzi
2 Umfuziselo wephupha «elibanjiweyo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Umqondiso wephupha "elibanjiweyo" - ukutolika kokomoya
Umqondiso wephupha "elibanjiweyo" - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuzibona uvaleleke ephupheni lakho kuthetha ukutolikwa ngokubanzi kokutolikwa kwephupha elo liphupha liziva ngathi lingene ngaphakathi el mundo Kuyinyani ukuba uziva ngathi ndibanjelwe yena. Rhoqo le mvakalelo ibangelwa luloyiko okanye iintsilelo zakho ethi ke, ngokufuthi ingaqatshelwa, ikhokelele ngakumbi ekuhlukanisweni nohlobo lwentolongo engaphakathi, athe umntu wazenzela yona engazi.
Ukuba umntu ukuthandana kunzima kwilizwe lokwenyani kwaye amaphupha okubanjiswa, le meko yephupha inokuba luphawu lokuba ubudlelwane buya kuphela kungekudala.
Kuxhomekeke kubomi bomntu ngamnye kunye neemeko zothando, uphawu lwephupha lunokuthi "lubanjwe" isilumkiso ukuba. Ngaba uyazibona wena okanye omnye umntu ekuthinjweni? Mhlawumbi ngeentambo zombane? Okanye mhlawumbi isilwanyana esifana ne-shrew, u-sparrow, i-woodpecker, i-hawk okanye i-hawk? Okanye ngaba ubone i-mink ebanjwe kwifama yokuzalanisa? Oku kungabonisa ukuba omnye umntu unokuziva ethintelwe kubudlelwane okanye nawe ngokwakho ungaziva ngathi unendawo encinci yakho. Unokuziva unyanzelekile, ezinokuziva ngathi ubanjisiwe.
Ukuba inyosi enkulu ibanjiwe ephupheni, oku kungazisa amaxesha anzima. Umphuphi ujongene neengxaki ezithile kwihlabathi elivukayo. Njengomfanekiso wephupha, i-mackerel ethathiweyo ihlala ibhekisa kumzuzu ophumelelayo.
Ukuba umntu ubanjwe ephupheni entolongweni kwaye ubanga ukuba umsulwa, oku kubonisa ukuba umntu usiphatha kakubi ekuvukeni ubomi. Ukuba omnye umntu uvaleleke ngaphaya kwezitshixo kwaye umtyelele apho, oku kunokuba nento yokwenza nokuba ungubani. Ukuzisola yiva into kwaye ngoku zama ukuyilungisa ngokukhawuleza okukhulu.
Ukubona ikepusi yamabanjwa amnyama nemhlophe enemigca kunokuba liphupha ukubonisa ukuba umntu akaziphathi ngenkalipho ngendlela afuna ngayo.
Nangona kunjalo, ukubanjiswa kunokuba kuhle kakhulu inkanuko yesini unayo. Umzekelo, ukuba uphupha ubotshwe liqabane lakho okanye uzibeke kwindawo ebanjiweyo. Mhlawumbi kude kube ngoku ibingumbono kuphela entlokweni yakho ngoku ovelayo njengephupha kwaye ekucela ukuba uwenze ...
Umfuziselo wephupha «elibanjiweyo» - ukutolikwa kwengqondo
Uphawu "olubanjiweyo" lwephupha lubonisa umntu ophuphayo ukuba kungayimfuneko ukurhoxa okwethutyana kwaye Ukuphumla y ulonwabo ukonwabela. Ukubanjiswa kunxulunyaniswa neemvakalelo zoxinzelelo kunye noloyiko. Nokuba ungazifumana kanjani kwaye ubotshwe njani kwaye ukhulule amakhamandela kwaye uqaphele ukuba yintoni efunekayo ukuze uzive ukhululekile.
Ukubanjwa kutoliko lwengqondo lwamaphupha nako kunokuba njalo Iimvakalelo kunye nokungakwazi ukuzivakalisa. Asinguye wonke umntu okwisimo sokuhlala ebonisa ngokunyanisekileyo imeko-bume okanye umlingane wakhe ukuba zeziphi iimvakalelo ezikhoyo kubo. Ngamanye amaxesha awufuni.
Kodwa rhoqo awunakukwenza ngendlela othanda ngayo. Ngezizathu zokungazithembi, iintloni okanye amathandabuzo. Nangona kunjalo, ukuphupha uziva zonke ezi mvakalelo kukodwa kwaye uzishiya ngqo apho: ngaphakathi. Apho kungekho mntu unokukubona kwaye apho angenakho ukukwenza ube buthathaka kwaye ube sesichengeni. Iimvakalelo zitshixiwe kude kungabikho mntu uzibonayo. Nguye kuphela ophuphayo owaziyo ukuba leliphi ibanjwa elihleli apho emphefumlweni wakhe ...
Ukuba umntu ubanjiwe nge-purr okanye ikhonkxiwe, siyacotha kwihlabathi lokuvuka. Yintoni esithintelayo ekwenzeni into yethu phuhliso lwabantu. Apha umphuphi kufuneka ajonge kwaye azibuze: Ngubani othintela ukukhula kwam amandla? Ngaba abanye okanye ndim?
Umqondiso wephupha "elibanjiweyo" - ukutolika kokomoya
Ukujongana nomxholo "obanjiweyo" ephupheni kunokuba yeyakho ukuba uphuphe ngayo amakhamandela akho ukutyhila. Oku kukuthintela ukuba ungahlukani neenkolelo ezingqongqo kwaye Ukuqonda okutsha ukuphumelela kwindlela yenkqubela phambili yakho yokomoya.